စက္ကူအိတ်ကလေး ကျွန်တော်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စက္ကူအိတ်ကလေး ကျွန်တော်…
Posted by ကို ထွဋ် on Jul 28, 2014 in Creative Writing | 16 comments
ဂျန်န၀ါရီ နောလစ်... ဘ၀တကွေ့က အင်္ဂလိပ်စာ... ခေတ်သစ် အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်များ...
ဒါလေးက ကျွန်တော် အရင်က ဘာသာပြန်ပြီး ကလေး ရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းမှာ ထည့်ဖို့ ရေးထားတာ…
နောက်များကျတော့ ပုံမှန်ရေးဖို့ကို မအားတာနဲ့… မပို့ဖြစ်တော့တာပေါ့… ရေးထားတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်…
ဂဇက်ထဲက ကလေးရှိတဲ့သူတွေ ပုံပြောသိပ်လို့ရတာပေါ့… အခုကတော့ အရင်ရေးထားတဲ့ အတိုင်းပဲ တင်လိုက်ပါတယ်…
နောက်တခေါက်ဆို ပုံပြင်ပုံစံမျိုးပြောင်းတင်ပါ့မယ်… ဆရာ သစ္စာနီကို အားကျလို့ပါ… သူကတော့ ဇာတ်နိပါတ်တွေပိုင်တော့.. မော်ဒန်ဇာတ်နိပါတ်တွေ ရေးတယ်…
ကျွန်တော်က ဘာသာပြန်ပဲ အားသန်လို့ ဘာသာပြန်ပဲ တင်ပါတယ်ဗျာ… နောက်ထပ် ဘာသာပြန် တင်စရာတွေ ရှိပါသေးတယ်.. Idea မဂ္ဂဇင်းကို မပို့ဖြစ်လိုက်တဲ့ ပို့စ်တွေ ရှိပါတယ်.. တင်ပါမယ်ဗျို့…
ကဲ… ဇာတ်လမ်းလေးက ဒီလိုပါ….
ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေကို ပေါင်မုန့်ထည့်ဖို့ ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ အ၀တ်အစားနဲ့ ကစားစရာ အစရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ထည့်စရာအနေနဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့အပြား နေ့တဓူဝ အသုံးပြုနေကြပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဇာတ်ကောင် ပက်ပီကတော့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်(ပလတ်စတစ်အိတ်) တွေနဲ့ မတူပါဘူး… သူကတော့ အထူးစပယ်ရှယ် စက္ကူအိတ်လေးပေါ့… ပြီးတော့ သူ့မှာ စီမံကိန်း တခုကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်…
လူတို့စွန့်ပစ်ထားတဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေဟာ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေမှာ မျောပါရင်း ရေထုကိုညစ်ညမ်းစေပြီး အနီးတ၀ိုက်မှာရှိတဲ့ ရေနေသတ္တ၀ါတွေကို ပျက်စီးစေတယ်ဆိုတာကို ပက်ပီလေး သိပါတယ်…
ဒီလိုဆက်ဖြစ်သွားဖို့ကိုလဲ ပက်ပီလေးက မလိုလားပါဘူး… ဒါကြောင့် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေကို စွန့်ပစ်တာ အဆုံးသတ်ဖို့ အစီအစဉ်တခုဆွဲဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်… တနေ့မှာတော့ သူဟာ စူပါမားကတ်အကြီးကြီးတခုက မန်နေဂျာနဲ့ စကားပြောဖို့ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်…
“ ဟဲလို မစ္စတာ မန်နေဂျာ ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်း စက္ကူအိတ်လေး ပက်ပီပါ… ဈေးလာဝယ်တဲ့အခါမှာ ကြွပ်ကြွပ်အိတ် အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ပေးဖို့ အကြံဥာဏ်ပေးချင်ပါတယ်..” လို့ ပက်ပီလေးက ပြောခဲ့ပါတယ်…
“ဘာရယ်..! မင်းရူးသွားပြီလား ? ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာ မသုံးရင် ဘယ်နေရာမှာ သွားသုံးရမလဲ ?” လို့ မန်နေဂျာက ဒေါသတကြီးနဲ့ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်…
ပြုံးပါတယ်.. အလွန်ရိုးရှင်းစွာနဲ့ ပက်ပီလေး ပြုံးပါတယ်… ပြီးမှ “ ကျွန်တော့် အစီအစဉ်က ကျွန်တော့်လို စက္ကူအိတ်တွေကို ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နေရာမှာ အစားထိုးပေးဖို့ပါပဲ… ပြီးတော့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေ နဲ့ စက္ကူအိတ်တွေကို ဒီတိုင်း လွှင့်ပစ်မယ့်အစား ပြန်အသုံးပြုပေးဖို့ အကြံဥာဏ်ပေးချင်တာပါဗျာ့” လို့ အလွန်တရာ စိတ်အားထက်သန်တဲ့ လေသံနဲ့ ပက်ပီလေးက ပြောခဲ့ပါတယ်…
အဲဒါကို မန်နေဂျာလည်း ကြားကြားချင်း စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ “ဒါလဲ မဆိုးပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ စက္ကူအိတ်တွေ ပြန်သုံးတော့ရော ဘာကောင်းလို့လဲဗျာ့” လို့ မေးလိုက်ပါတယ်…
“အော်.. ပထမဆုံးတော့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးတာ နည်းသွားမယ်… အသစ်ထပ်မ၀ယ်ရဘဲ ဒါတွေပဲ ပြန်သုံးတော့ ပိုက်ဆံလဲ ချွေတာပြီးသားဖြစ်တာပေါ့” လို့ ပက်ပီက ရှင်းပြပါတယ်…
ဒီတော့မှ မန်နေဂျာကြီးလဲ “သြော်.. ဒါတွေဟာ သဘာဝ အရင်းအမြစ်တွေကို ဖြုန်းပစ်နေပါလား.. ဒါတွေကို ရှောင်ကြဉ်ရမှာပါလားလို့” သဘောပေါက်သွားပါတယ်… ဒီလိုနဲ့ နောက်အပတ်တွေလဲရောက်ရော စက္ကူအိတ်တွေနဲ့ ပြန်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်(Recycle) တွေကိုသာ ဈေးဝယ်သူတွေကို ထုတ်ပေးပါတော့တယ်…
ပက်ပီလေးလည်း “ အမြဲတမ်း ကမ္ဘာကြီးကို စောင့်ရှောက်ဖို့၊ အိတ်တွေကို ပြန်အသုံးပြုဖို့ နဲ့ Recycle ကို တိုက်တွန်းဖို့” ဆိုတဲ့ သူ့မက်ဆစ်လေးကို ကမ္ဘာတလွှားက စူပါမားကက် တစ်ခုမှသည် တစ်ခုဆီကို လိုက်လံပြောပြနေပါတော့တယ်…
မှတ်ချက်။ ။Bed Time Story (Pappy) ကို ဘာသာပြန်ပါသည်…
ဒီမှာတော့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေး အတွက် စက္ကူ အိတ် စီမံကိန်း စနေပြီ။
ဒါပေမဲ့ စက္ကူ ဆိုတိုင်းလည်း အလဟသသုံးလို့ မဖြစ်။
ဟုတ်ပါ့… ဟုတ်ပါ့…. ဟွင့်…
အခု ဒီမှာ ကျွတ်ကျွတ်အိတ် တွေ မသုံးအောင် စနေပြီ။
Super Market တွေမှာ တစ်အိတ် သုံးရင် ငါးပြား ပေးရတော့မယ်။
အခုတော့ အများစု က ဈေးဝယ်ရင် ဂုံရှော်အိတ် တွေ စသုံးလာပြီ။
နောက်လဲ ပြန်သုံးလို့ ရ၊ များများလဲ ဆန့်တာကိုး။
ကျေးဇူးပါ.. ဒါက ခေတ်သစ် ပုံပြင်တွေပါ.. ကောင်းတယ်ဗျ.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြိုက်လို့ ဘာသာပြန်ထား.. အမှတ်တရ စုထားတာ.. ကိုယ့်ကလေးကို သိပ်ရင်… ဇာတ်နိပါတ် အပြင် နောက်ထပ်ပုံပြင်တွေပေါ့…
Good Story!!!!! ပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အလွန်ကောင်းတဲ့ ပုံပြင်လေးပါ…
ကျုပ်တို့ ဆီမှာတော့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ဒဏ် တော်တော်ခံစားနေရပါပြီ :chee:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဒါနဲ့ ပျောက်နေတယ် ဟုတ်.. ဦးကြီးမိုက်သမီးကတော့ အခုလို အိပ်ယာဝင် ပုံပြင်ချော့သိပ်ရမယ့် အရွယ်မဟုတ်တော့… ဗဟုသုတပဲ ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်…
ဒီက စူပါမားကတ်တွေမှာ Recycle အိတ်တွေချိတ်ထားပေမဲ့ ဝယ်သုံးတဲ့သူနည်းနေသေးတယ်ဗျ ကိုယ်တိုင်လည်းဝယ်မသုံးမိဘူးလေ
ဟုတ်.. ကိုခရေ… အရင်ပို့စ်တွေ လိုက်အားပေးနေတာ ကျေးဇူးဗျာ.. ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်တွေကျနေတာ.. ကိုယ်စက်တောင် မဖွင့်ဖြစ်ဘူး..
လိုပါသေးတယ်ဗျာ… ရောင်းတန်း မ၀င်သေးဘူး.. ပြင်ပေးနေရတုန်းပဲဗျ…
သူ့ရဲ့ သတင်းစကားလေးတွေက နိုင်ငံဘယ်လောက်များ ခြေဆန့်ပြီးပလဲမသိ
ဒီပိုစ်ကို အခု မှဖတ်မိတယ်
ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ပေါ်စက တကမ္ဘာလုံးလောက်က ပျော်ခဲ့ ကြ အထူးအဆန်းဖြစ်ခဲ့ကြ
စက္ကူနဲ့ ထုပ်တာမ လုံ ခြုံဘူး
ဖက်နဲ့ ထုပ်တာ မသန့်ရှင်းဘူး
ဒါပေမယ့် နောက် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာချိန်မှ ကိုယ့် ကို အန္တရာယ်ပေးတယ်ဆိုတာသိခဲ့ ကြရတယ်။
ဒီအတိုင်းပါဘဲ လက်ရှိအချိန်မှာ မှန်တယ် လို့ ယူ ဆ ယုံ ကြည် တာတွေ က နောင်ကြမှာမှားမှန်းသိကြရတာပါ
ဒါကလဲ ကိုခက ပြန်ဖတ်ပြီး ပြန်မန့်လို့ လေးပေါက်ရဲ့ မဟုတ်ရင်… ဖတ်ဖြစ်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး..
ခေတ်သစ် အိပ်ယာဝင် ပုံပြင်တွေ ရှိသေးတယ်… ဘာသာပြန်ပြီး တင်လိုက်ရမလား..
မြန်မာပြည်မှာတော့ လုပ်နေကြတာ ကြာပါပြီ ခုထိတော့ မအောင်မြင်သေးဘူး။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ဈေးမှာ တိုဖူး ၀ယ်ရင်တော့ စက္ကူ နဲ့ပဲ ထုတ်ပေးတယ်…